Xiddigta Hollywood Ubax Maxamed iyo sidii ay magaceeda u nacday – Radio Daljir
Ubax Maxamed waa qoraa sare oo ka hawlgasha istuudiyayaasha Hollywood. In kasta oo maanta ay tahay gabar laga dabadhacay, laakiin sida ay heerkaas ku gaartay waa hawl kale.
Dhibaha adag ee Ubax yaraanteedii soo foodsaaray waxaa ugu darnaa tan Soomaalinimadeeda, magaceeda iyo xijaabkeeda. Ubax waxa ay ka soo guurtay gobolka Memphis waxa ayna soo degtay New York. Ogoow oo waqtigu waa 11ka Siteenbar iyo qaraxii New York kabacdi. Waqtigu waa ku adkaa qof kasta oo xijaab xiran.
Laakiin Ubax si dhakhso leh bay waxa ay ku ogaatay in aysan saan meel ku gaari karin, waxa ayna isla markiiba go’aan ku gaartay in ay xijaabka tuurto, sannadkii xigayna waxa ay badashay magaceeda.
Ubax hadda waa qoraa sare oo deggan magaalada Los Angles. Waxa ay aflaanta iyo shoowyada u qortaa istudiyayaal Hollywood, ayna ka midyihiin “The Whispers” waxayna ku jirtaa qorayaasha istuudiyaha “The CW Television Network” iyo shoowga “Legends of Tomorrow.”
Ubax waxaa dhashay Caasha Cabdalle oo ahayd Xildhibaan DFS, soona noqotay Wasiir DFS.
Ubax kali kuma noqon Hollywood oo waxa ay markii danbe la kulantay qorayaal sare ahna gabdho Soomaaliyeed oo ka hawlgala Hollywood ayna kamid yihiin Ramla Maxamed and Safiya Diiriye.
Ubax hadda waa ay ku faantaa magaceeda waxaana loo yaqaan Ubax Maxamed.
Hoos kaga bogo warka Ubax oo dhammaystiran
Maqaalo Kale 429 Wararka 26508